Wed, Sep 30, 2020 at 6:32am
बोलेरोको ठक्करबाट झापामा एक महिलाको मृत्यु #आहा खबर# यस्तो रहेको छ बुधबारको तपाईको भाग्य, असोज १४ गते #आहा खबर# यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफामुखी हुनुहुँदैन : गभर्नर अधिकारी #आहा खबर# मध्य अफगानिस्तानमा बिस्फोट, १५ जनाको मृत्यु #आहा खबर# कोटेश्वर–जडिबुटि सडक विस्तारको तयारी #आहा खबर# आइपिएलः दिल्लीले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो, सन्दीप भने आज पनि टिममा परेनन् #आहा खबर# बझाङ घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको छु: सभामुख सापकोटा #आहा खबर# सशस्त्र प्रहरीको टोलीद्वारा मोटरसाइकलसहित १९ किलो गाँजा बरामद #आहा खबर# भरुवा बन्दुक देखाएर तर्साउने दुई जना पक्राउ #आहा खबर# नेप्से आज पुनः ओरालो लाग्यो #आहा खबर# ब्रोइलरका चल्लालाई मेहेन्दी लगाएपछि... #आहा खबर# रसिया–कोरिया व्यापार २५ अर्ब डलर नजिक #आहा खबर# रुसले कोरोनाविरुद्धको खोपका २ करोड ५० लाख डोज नेपाल पठाउने #आहा खबर# मिटर रिडिङ नभएका विद्युतका ग्राहककाे जरिवाना नलिन उर्जामन्त्रीकाे आदेश #आहा खबर# आज कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु, कहाँ कति ? #आहा खबर#
ब्रोइलरका चल्लालाई मेहेन्दी लगाएपछि...
मंगलवार, असोज १३, २०७७ साल
काठमाडौं । अबैध रुपमा भारतबाट ब्रोइलरका चल्ला भित्र्याएर बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति यसअघि पटकपटक पक्राउ परेका हुन् । यस्ता गतिविधिमा नेपाली व्यवसायी नै संलग्न रहने गरेको आरोप लाग्दै पनि आएको छ । प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हजारौँ चल्ला नष्ट पनि गरेको थियो । त्यसको निगरानीमा नेपाली कुखुरा व्यवसायी आफैँ खटिँदै आएका पनि छन् । ब्रोइलर चल्लालाई विभिन्न रङ (मेहेन्दी) लगाएर..
पखालेर फेरि बिक्री गरिँदै प्रयोग भइसकेका लाखौँ कन्डम !
शुक्रबार, असोज ९, २०७७ साल
एजेन्सी । प्रयाेगमा आइसकेका ३ लाख २० हजार कण्डम फेरि बिक्रीका लागि प्याकिङ गरिराखेको अवस्थामा भेटिएका छन् । भियतनाममा यहाँको प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा उक्त परिमाणको कन्डम बिहीबार बरामद गरेको हो । ती कन्डम नयाँ प्याकेटमा फेरि नयाँ कन्डम जस्तै गरी प्याकिङ गरिराखिएका प्रहरीले जनाएकाे छ । भियतनामको बिन दुओङ प्रान्तस्थित हो चि मिन्ह सहर नजिकै उक फ्याक्ट्रीमा यस्तो भेटिएको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन् । जहाँ प्रहरीले प्रयोग..
एकै मानिसलाई ६ महिनामा तीन पटकसम्म कोरोना संक्रमण
नयाँ दिल्ली, ९ असोज । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएपछि अब बाँचियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर, भारतका एक युवकलाई ६ महिनामा तीन पटक कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ। केरलको त्रिशूलका ३८ वर्षीय पालाबेलिल साबियो जोसेफलाई गत ६ महिनामा तीन पटक कोरोना संक्रमण भएको हो। पहिलो पटक उनलाई ओमनमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनी ओमनको एक इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा सुपरभाइजरका रुपमा कार्यरत थिए। छाती दुख्ने,..
नियमित चस्मा लगाउने मानिसमा काेराेना संक्रमणकाे खतरा कम !
एजेन्सी । नियमित चस्मा लगाउने मानिसलाई काेराेना संक्रमणकाे खतरा कम भएकाे तथ्य खुलेकाे छ । काेराेनाबारे अध्ययन गरिरहेका चीनका केही अध्येताले चस्मा नलगाउने भन्दा नियमित चस्मा लगाउने मानिसलाई काेराेना संक्रमणकाे खतरा कम हुने नयाँ अनुमान गरेका हुन् । अध्येताहरूले कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूको तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए। यही क्रममा उनीहरूले यो अनौठो प्रवृत्ति फेला पारेका हुन्। उनीहरूले अध्ययन गरेका..
अस्ट्रेलियामा भेटियो ३५० केजीको विशाल गोही
शुक्रबार, भाद्र १९, २०७७ साल
अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियाको निकै लोकप्रिय पर्यटकीय उत्तरी क्षेत्रमा संरक्षणकर्मीहरुले एउटा विशाल गोही फेला पारेका छन्। वन्यजन्तु अधिकारीहरुले उक्त गोही करिब १५ फिट लामो र करिब ३५० केजी तौलको रहेको बताएका छन्। क्याथारिन वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्रका वरिष्ट वन्यजन्तु अधिकृत जोन बर्कले फ्लोरा नदीमा विशाल भाले गोही फेला परेको जानकारी दिए। यो गोही यस क्षेत्रमा भेटिएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो, उनले भने। तीन वर्षअघि..
पेरोनिजले ध्वस्त पार्छ पुरुषको 'सेक्स जीवन'
बुधबार, भाद्र १०, २०७७ साल
एजेन्सी। आज पनि सेक्स र सेक्स जीवनसँग जोडिएका समस्याका बारेमा कुरा गर्न मानिसहरू हिच्किचाउने गर्छन्। तर केही मानिसहरू यौन जीवनबारे खुलेर कुराकानी समेत गर्छन्। पेरोनिज एक यस्तो बिरामी हो, जसबारे धेरै कम मानिसलाई मात्रै जानकारी हुन्छ र यसले तपाईंको यौन जीवन पूर्ण रूपमा बर्बाद गरिदिन्छ। पेरोनिज रोग लागेको पुरूषको गोप्य अंगका केही भाग केही अलग रूपमा विकास हुन जान्छ। तर, यो..
कुकुरकाे अधिकारका लागि जर्मनीमा बन्याे नयाँ कानून
आईतवार, भाद्र ७, २०७७ साल
एजेन्सी, ७ भदाै । कोरोना महामारीका कारण विश्वका अधिकांश मानिस घरभित्रै बसिरहेका बेला जर्मनीले भने अचम्मको नियम ल्याएको छ। पशु अधिकारका हकमा मैत्रीपूर्ण देखिएपनि कोरोना कहरमा थलिएका मानिसहरुलाई यो नियमले समस्यामा पार्नसक्छ। नियमअनुसार जर्मनीका मानिसहरुले पालेका कुकुरलाई दिनमा कम्तिमा एक घण्टा घरबाहिर डुलाउनुपर्नेछ। एकैपटक डुलाएर मात्र पुग्ने छैन, बरु दिनमा दुईपटक मालिकहरुले आफ्ना कुकुरलाई घरबाहिर निकाल्नुपर्नेछ। सीएनएन अनुसार त्यहाँको संघीय कृषि र खाद्य..
‘यौनसुख प्राप्त गर्न यौन तालिका आवश्यक’
शनिबार, श्रावन ३१, २०७७ साल
काठमाडौं। कुरा अनौठो र भड्किलो लाग्न सक्छ। किनभने हामीकहाँ यौनको कुरा गर्नसाथ हामी लाजले खुम्चन्छौं। हामीलाई लाग्छ, यौन भनेको छाडा कुरा हुन्। यही भ्रमित मानसिकताले हामी यौनको बारेमा खुला चर्चा गर्दैनौ, यौनको उन्मुक्त आनन्द लिदैनौं। अध्ययनहरुले भन्छ, यौनसुख नै दाम्पत्य सफलताको प्रभावकारी सूत्र हो। तर, हाम्रो यौन जीवन त्यती सुखमय छैन, जति हुनुपर्ने थियो। त्यही कारण हाम्रो दाम्पत्य कसिलो र रसिलो..
कुखुराको मासुमा पनि भेटियो कोरोना भाइरस
शुक्रबार, श्रावन ३०, २०७७ साल
काठमाडाैं, ३० साउन । कुखुराको मासुमा कोरोना भाइरस भेटिएको छ। ब्राजिलबाट चीनको शेन्जेन आयात गरिएको फ्रोजन गरिएको कुखुराको पखेटामा कोरोना भाइरस भेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आयातित खाद्यवस्तुको स्क्रिनिङका क्रममा बुधबार कुखुराको पखेटाको पनि नमुना लिइएको थियो। सीएनएनका अनुसार शेन्जेन प्रान्तको लंगाङ जिल्लामा लिइएको सो नमुनामा कोरोना भाइरस भेटिएको हो। बिहीबार एक भनाइ जारी गर्दै नगरपालिकाले यसबारे जानकारी दिएको हो। हालसम्म कुनै पनि..
महिला यौन जीवनमा असन्तुष्ट हुनुका यस्ता छन् ५ कारण
शनिबार, श्रावन २४, २०७७ साल
काठमाडौं। सम्बन्धमा यौन सम्बन्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा महिलाहरू आफ्नो यौन जीवनमा त्यति सन्तुष्ट भएका पाइँदैन। महिलाहरू यस विषयमा खुलेर कुराकानी गर्न चाहँदैनन् तर उनीहरू भित्रैदेखि निराश भइरहेका हुन्छन्। महिलाहरू आफ्नो यौन जीवनमा असन्तुष्ट हुनुका केही कारणहरू छन्। १. महिलाहरू सम्बन्धमा तपाईंको प्रेम, स्नेह र सम्मानको महसुस गर्दैनन् भने उनीहरूको लगाव कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शारीरिक घनिष्ठता उनीहरूले सोच्नसमेत..
यस्ताे बन्याे ८ भाषामा अनुवाद गर्ने स्मार्ट मास्क
बुधबार, श्रावन २१, २०७७ साल
एजेन्सी । टोकियो-कोभिड–१९ को महामारीले फेस मास्कलाई प्रत्येक दिनको आवश्यकता बनाएसँगै जापानको स्टार्टअप डोनट रोबोटिक्सले यसको अवसरको सदुपयोग गरेको छ । यो कम्पनीले स्मार्ट मास्क बनाएको छ । यो मास्क कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने मात्रै होइन संवाद पनि गर्छ र सामाजिक दुरीलाई सहजै पालना गर्न सहयोग गर्छ । एक एपको संयोजनमा सी–फेस मास्कले बोलीको नक्कल गर्न, प्रयोगकर्ताको आवाजलाई ठूलो पार्न र मानिसले..
अब कुकुरले मानिसकाे पसिना सुँघेर कोरोना पत्ता लगाउने
शनिबार, श्रावन १७, २०७७ साल
काठमाडाैं, १७ साउन । चिलीमा कुकुरलाई पसिना सुँघेर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पत्ता लगाउने तालिम दिन सुरु गरिएको छ । चिलीका प्रहरी अधिकारीले स्निफर जातका कुकुरलाई त्यस्तो तालिम दिन सुरु गरेका हुन्। यसअघि यस्तो तालिम बेलायतमा पनि सञ्चालन गरिएको थियो, जसको नतिजा प्रभावकारी देखिएको थियोा। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार सुरुको तालिममा चारवटा स्निफर जातका कुकुर छानिएको छ भने त्यसमा लेब्राडोर र गोल्डे..
अब कुकुरले सुँघेरै कोरोना संक्रमित व्यक्ति पत्ता लगाउने अनुसन्धानकर्ताकाे दाबी
आईतवार, श्रावन ११, २०७७ साल
काठमाडाैं, ११ साउन । स्निफर कुकुरलाई तालिम दिएपछि उनीहरूले कोरोना संक्रमित व्यक्ति पत्ता लगाउन सक्ने जर्मनीका अनुसन्धानकर्ताले दाबी गरेका छन्। यो सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर युनिभर्सिटी अफ भेटेरिनरी मेडिसिन हेनोभरका वैज्ञानिककोे अध्ययनले स्फिनर कुकुरलाई प्रशिक्षण दिएपछि उनीहरूले ठूलो दक्षतासाथ कोरोना संक्रमित व्यक्ति पहिचान गर्न सक्ने कुरा पत्ता लगाएको हो। यस अध्ययनअन्तर्गत जर्मन आर्मीका ८ स्निफर कुकुरलाई एक हप्ता तालिम दिएपछि..
भारतमा कपाल मुण्डन गरिएका व्यक्ति नेपाली नागरिक नभएको पुष्टि
शनिबार, श्रावन ३, २०७७ साल
काठमाडौ। भारतको बनारसमा केही दिनअघि जवरजस्ती कपाल मुण्डन गरिएका व्यक्ति नेपाली नभएको खुलेको छ। उनलाई स्थानीय हिन्दु सेनाका सदस्यले एक हजार भारतीय रुपैयाँ दिएर 'नेपाली' बनाएको रहस्य खुलेको हो। वनारसका एसएसपी अमित पाठकका अनुसार भिडियोमा कपाल खौरिएको व्यक्ति भारतीय नागरिक हुन्। साडीको पसलको काम गर्ने धर्मेन्द्र सिंहले एक हजार रुपैयाँ लिएर कपाल खौरिएका स्थानीय मिडियाले उल्लेख गरेको छ। लकडाउनको कारण आर्थिक..
यस्ता छन् तान्त्रिक यौन सम्बन्ध बनाउने पाँच तरिका
शुक्रबार, श्रावन २, २०७७ साल
काठमाडौं। शारीरिक सम्बन्धका विभिन्न तरिकाका बारे धेरै थरि बहस हुन्छ। यीनै बहसहरु मध्ये पछिल्लो समय चर्चा सुरु भएको छ तान्त्रिक यौन सम्पर्कको। तान्त्रिक यौन, अलि भिन्न लाग्न सक्छ यो सन्दर्भ। वास्तमा यो यौनको कुनै अनौठो गतिविधि भने होइन। यसको लक्ष्य के मात्र हो भने, तपाईंका पार्टनरलाई आध्यात्मिक एवं गहिरो तरिकाले सम्झाउन बाहेक अरु कुनै गतिविधि नहोस्। यसको उदेश्य चरामोत्कर्ष मात्र होइन।..
शनिबार, आषाढ २७, २०७७ साल
शनिबार, आषाढ २०, २०७७ साल
आईतवार, आषाढ १४, २०७७ साल
बुधबार, जेष्ठ १४, २०७७ साल
आईतवार, जेष्ठ ११, २०७७ साल
मंगलवार, जेष्ठ ६, २०७७ साल
शनिबार, चैत्र २९, २०७६ साल
सोमबार, चैत्र २४, २०७६ साल
बुधबार, चैत्र १९, २०७६ साल
बिहिवार, चैत्र १३, २०७६ साल
बिहिवार, फागुन १५, २०७६ साल
बिहिवार, माघ २३, २०७६ साल
Results 619: You are at page 1 of 21
बोलेरोको ठक्करबाट झापामा एक महिलाको मृत्यु
यस्तो रहेको छ बुधबारको तपाईको भाग्य, असोज १४ गते